Madaxweyne Shariif oo kulan xasaasi ah laqaatay odoyaasha Afgooye maxaa kasoo baxay kulankaas?
Madaxweyne Shiikh Shariif oo maanta booqasho aan horay loo sii shaacin kutagay Degmada Afgooye ayaa waxa uu kulan la qaatay odoyaasha degmada,waxayna usoo gudbiyeen cabashooyin dhowr ah oo ku saabsan dhibaato ay ku hayaan ciidamada doowlada.
Dad goob joogayaal ayaa inoo sheegay in odoyaasha Afgooye ay madaxweyne shariif runta indhaha kasaareen, iyagoo usheegay in ciidamo ka tirsan dowladda ay dil iyo kufsiba ka geeystaan inta udhaxeeysa Muqdisho iyo Afgooye,hadii uusan wax kaqabana aysan codkooda siin doonan doorashada madaxtinimada ee soo socota.
Intaas kadib ayaa madaxweynaha waxa uu kulamo albaabada uxiran laqaatay,saraakiisha ciidamada horkacaysa iyo taliyayaasha,waxaana wararku ay sheegayaan in madaxweynaha uu amar ku bixiyay in jeelka ladhigo sarkaal lagu magacaabo”taree dishe”oo ahaa taliye urur,sidoo kale waxaa baaris kusocotaa taliyaha guutada lixaad Ibraahim Yaroow, oo isna lagu eedeeyay inuu masuul kayahay dhaca ay ciidamada ku hayaan dadka kudhaqaan halkaas.
Sidoo kale waxaa lasheegay in madaxweynaha uu aad u canaantay abaanduulaha xoogga dalka Soomaaliya, Gen. C/kariin Faarax Dhagabadan,waxaana uu ku canaantay sababta uu uga war qabi waayay dhibaatada ay ciidamada kuhayaan dadka shacabka ah.
Madaxweynaha,ayaa amray in jeelka ladhigo raxan katirsan ciidamada iyo taliyayaal,kuwaasoo masuul ka ahaa dhibaateenta dadka shacabka ah.
Maalmihii ugu danbeeysay ayaa waxaa soo badanayay dhibaatada ay askarta doowlada ay ku hayaan dadka ku dhaqan inta udhaxeeysa Muqdisho iyo afgooye,iyagoo dhac,dil, iyo kufsi intaba ugaysta, iyadoo goor sii horeeysay degmada afgooye uu askari katirsan ciidamada doowlada kudilay wiil iyo aabihiis.